Enye indlela yokusebenzisa i-QGIS kwii-mobiles ze-Android kunye ne-iOS-iGeofumadas
Ikhaya/Okufumaneka/Enye indlela yokusebenzisa i-QGIS kwii-mobiles ze-Android kunye ne-iOS
OkufumanekaGeospatial - GISqgis
I-QGIS izibeke njengesixhobo somthombo ovulekileyo esikhula ngokukhawuleza kunye nesicwangciso sokuzinza ekusebenziseni indawo. Siyavuya ukwazi ukuba iinguqulelo zeQGIS zezixhobo eziphathwayo sele zikhona.
Ukusetyenziswa okubonakalayo kwezicelo eziphathwayo kwenza izixhobo zedesktop zikhethe ukuphuhlisa iinguqulelo eziza kusetyenziswa kwiifowuni okanye kwiitafile. Ityala lesoftware yeeNkqubo zoLwazi lweJografi licace gca ekuthatheni inxaxheba kulo georeferencing kunye nasekusebenziseni umhlaba ebaleni nakwidesktop ye-Geo-engineering ngokuxhomekeka okuphezulu. Kude kube ngoku, iinkampani ezikhuthaza isoftware yokuthengisa ziye zanezicelo zazo zeselfowuni ixesha elide, kubandakanya AutoCAD WS, BentleyMap yeselula, i-ESRI ArcPad, SuperGeo iselula, ukunika imizekelo.
Kwimeko ye-QGIS, ubuncinci izicelo ezimbini zichaziwe njengezisombululo, ezandleni zeOpenGIS.ch:
1. I-QGIS ye-iOS.
Nditsho nokuphupha ngayo. Nangona i-QGIS iyiqonga kwi-desktop yayo, ukuba nohlobo lwe-QGIS ye-iPhone okanye ye-iPad ngokuqinisekileyo ayinakwenzeka; mhlawumbi ngekhe i-Apple ingatshintshi imigaqo-nkqubo yayo yeshishini.
Ingxaki kukuba uhlobo lwephepha-mvume olusetyenziswa yi-QGIS yi-GPL, ethi yona ekuvulekeni kwayo ikhowudi yaziwe kwaye iphuculwe ngabasebenzisi bokugqibela. Imigaqo yomdlalo weAppStore ithi akunakwenzeka ukuba kuphuculwe izicelo ezingenayo ikhowudi yokuthengisa eqinisekisa ukuba ayizukusetyenziselwa ukonakalisa umdla wabucala wesithathu. Ke ekuphela kwendlela eya kuba kukuphuhlisa ngaphandle kweAppStore, ucinga ukuba abasebenzisi abanomdla bangasiJailbreak isixhobo, esingesosilumko, kwaye ingeyiyo nokukhethwa ngabasebenzisi be-iOS.
Usizi, ucinga inani labasebenzisi kunye neenkampani ezikhetha isofthiwe ye-Apple, kodwa ngumzekelo weengxaki esiza kuzibona kwixesha elizayo, isofthiwe eselungelo lokufuna ukuvala izithuba zeprogram ye-free.
2. QGIS ye-Android
Esi sisicelo esilinganisa inguqulelo ye-QGIS yedesktop kuhlobo 2.8 Wien. Isicelo sinobunzima malunga ne-22 MB, kunjalo khuphela ngqo kwi-Google Play.
Nje ukuba inkqubo yokufaka iqale, icela ukuba uMphathiswa II afakelwe, osebenza njengebhulorho phakathi kwesicelo seQGIS kunye neelayibrari zeQT. Emva kofakelo lweMinistro II, sebenzisa ukhuphelo lweelayibrari zeQT5, ezinje ngeQt5Core, qtnystlm, qtsensor, qtGui, libqoffscreen, libminimal, qlibqeglfs, nolunye ulawulo olusebenzisa amandla okubekwa komhlaba, ikhampasi, ikhibhodi, ulawulo lwedijithali kunye nezinye izinto ezisebenzayo ze-Android.
Lilonke isicelo phantse ikopi QGIS desktop kunye icons iipanele icala yahluka kwi menu ngumxholo ibekwe njenge mobile features i icon kwikona engasentla ekunene kwaye ke le mouse control (umqulu , ukhetho, ukondeza) lucacile.
Ngamafutshane, ungalindeli ukusebenzisa esi sicelo ngefowuni. Nokuba isikrini sikhulu kangakanani, ayisebenzi kuba iibar zokuhamba zokukhethwa kwedatha azinakulawulwa; Kwakhona isicelo asivumeli ukujikeleza. Njengoko ubona, ndikwazile ukuzisa iprojekthi, ndibiza idatha yeWFS kwaye ndiyisebenzisa ngefowuni yeSONY Xperia T3; Ngelixa idatha inokujongwa, ulawulo lwepaneli esecaleni alunakwenzeka kwaphela.
Ukuyisebenzisa ngetafile yesayizi eqhelekileyo ngokuqinisekileyo kuyasebenza njengoko kufana nokusetyenziswa kwedesktop. Kuya kufuneka ulwe kancinci ukuqonda ukuba idatha igcinwa phi kwikhadi le-MicroSD okanye kwimemori yangaphakathi.
Khuphela i-QGIS ye-Android
3. QField yeQGIS
Esi sicelo siphuhliswa yinkampani efanayo, sinomlinganiselo ophantse 36 MB.
Ekuqaleni, licela ukuba kubekho iprojekthi yeQGIS, eya kuba yinkimbinkimbi kuba ubeka ifayile kwithebhulethi iya kuthetha ukuba iindlela eziya kwiedolophu zendawo zihambelana.
I-QField ine-interface yomsebenzisi yemveli yokuthinta kunye nezixhobo eziphathwayo. Isixhobo sokuvumelanisa sivumela ukutshintshiselana okuqhubekayo kwedatha phakathi kwesixhobo esiphathwayo kunye nesiseko esele sikhona. Ijongeka intle kakhulu njengoncedisayo kwisuti yeQGIS, ngokungafaniyo naleyo ingaphambili eyimodeli yenguqulo yedesktop.
Njengoko ubona, ukusetyenziswa kwesi sicelo, ukuba ungowokuzalwa, uhlengahlengiso, nangona usebenzisa ifowuni encinci yescreen. Kuhleli ukuyivavanya, kuba ukungena kwifayile ngeendlela ezihambelanayo yinto ebendingayilindelanga.
Khuphela iQField yeQGIS
QGIS 3.0 - Njani, nini kwaye ntoni; oko kuthetha
INkosi yoYilo noCwangciso lweeDolophu [UJCV]
Inkqubo yokufaka esekwe kwi-QGIS iyafumaneka kwi-iOS (TestFlight okwangoku):
Ulungele ukuhlwa wonke umntu, ndifuna ukubuza ukuba umntu uyayazi indlela ifoto ifakwe kwisalathisi sohlobo lwendawo, kwiprojekthi yam sele ndiyidalise insime kwaye ndibeke imithombo yangaphandle yinto ekhankanywe kwiphepha elisemthethweni, kodwa kanye isicelo xa uthatha isithombe, oku kugcinwa. Ngaba umntu uyazi isizathu sokuba Ndizamile ngeendlela ezinxulumene neziqhelo kwaye akukho nto.
Ukubulisa kubo bonke kwaye nayiphi na impendulo yamkelekile
Ewe, besele ndiqondile. Kwenzeka ukuba iprojekthi endifuna ukuyisebenzisa ineendlela ezizinzileyo.
Iindlela kwiiprojekthi ze-QGIS ngokuzenzekelayo zihambelana. Akukho nto idle. Ukukopa nje ifolda kwipilisi yakho okanye kwifowuni.